Kacha mma CFTC Regulated Brokas 2021 | Full Mụta 2 Trade Guide March 2021
Best CFTC Broka 2021
Na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ebe ịntanetị, ọ nwere ike isi ike ịmata ebe ị ga-ebido n’emeghị ka mkpịsị aka gị gbaa ọkụ. Nke a bụ ebe iwu na-abata.
Ndị Commodities & Futures Trading Commission (CFTC) bụ ikike nwere ike ịhazi ọnọdụ akụ na ụba yana ịchịkwa azụmaahịa. Otu usoro iwu a bụ ụlọ ọrụ gọọmentị etiti dabere na US.
N'agbanyeghi ma ịmalitela njem njem gị, ma ọ bụ na ị ka na-achọ ezigbo onye na - ere ahịa - ị nwere ike ịhụ nyiwe nwere ikikere sitere na CFTC, FCA na ASIC ịkpọ ole na ole. Emepụtara ozu ndị a iji kpuchido gị n'aka ụlọ ọrụ aghụghọ dị ka nke ọma yana ịnye gị net nchekwa na ego gị.
N'ime peeji a, anyị ga-agwa gị ihe niile ị kwesịrị ịma mgbe ị na-achọ onye na-ere ahịa CFTC. Anyị ga-ekwubi site na-atụle kacha mma CFTC agbanwe nke 2021.
AvaTrade - Onye guzobere onye ahia ahia na Commission-Free Trades
Lezienụ 0% na ngwa CFD niile
Veragelọ ọrụ leverage dị
Ozugbo tinye ego na debit / kaadị akwụmụgwọ
Kedu ihe bụ CFTC?
Na nkenke, CFTC bụ nzukọ kwụụrụ onwe ya nke emere na 1974. Nke a bụ oge izizi etinye ụkpụrụ na iwu iji jide ndị na-ere ahịa ịza ajụjụ maka omume ha na nlekọta ndị ahịa ha.
Enweela mgbanwe ole na ole kemgbe ahụ mmadụ malitere. Iji maa atụ, arụnyere Commodity Futures Modernization Act nke 2000 ka e tinye iji jikọọ CFTC na SEC (Securities and Exchange Commission) na ebumnuche nke ịchịkwa ọnọdụ ọdịnihu ngwaahịa. Iwu Dodd-Frank nke 2010 dugara ike CFTC na ahịa ịgbanwee. Ọ pụtakwara usoro ntuziaka ọhụrụ ịgbaso maka ndị na-ere ahịa CFTC.
Ọganihu ngwa ngwa afọ iri na ebumnuche bụ isi nke CFTC bụ ịmalite ma kwado ahịa asọmpi ego, nke siri ike, na nke uzo. Agencylọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ugbu a na National Futures Association (NFA). Nke a na achi achi na ị na-enwe ike ahia na mma ma nọrọ ná nchebe envinroment.
Kedu ihe chọrọ CFTC nwere na Broka?
Ihe CFTC choro na ndị na-ere ahịa buru ibu. Companylọ ọrụ ego ọ bụla (dị ka ndị na-ere ahịa) ga-etinye akwụkwọ maka ikikere site na ngalaba na-achịkwa iwu. Thelọ ọrụ na-ere ahịa ga-agabiga ule nnabata siri ike, gosipụta nghọta nke nlekọta ndị ahịa, ma wụfee n'okpukpọ tupu ha enwee ike ịnye ọhaneze ngwaahịa ego.
Enwere ọnọdụ ndị ọzọ dị oke mkpa a ga-ezute tupu ụlọ ọrụ ahụ arụ ọrụ n'ụzọ iwu na ohere ego. Anyị etinyela ndepụta ọnụ na-akọwapụta ihe ndị chọrọ n'aka ndị na-ere ahịa na CFTC.
AML / CTF na CDD
Abia na idebe ohere ego ebe di mma ma di uzo nye mmadu nile - oke nke AML (Anti Money Laundering) na CTF (Iguzogide Ego nke Iyi ọha egwu) na-ekere oke uzo. CDD (Mgbasa Ozi Ndị Ahịa) bụkwa nke kachasị mkpa.
Iwu dị mkpa maka ndị na-ere ahịa CFTC niile na-eme usoro Mara Ndị Ahịa Gị (KYC) mgbe ị na-edebanye aha onye ọ bụla. Iwu ahụ kwuru na onye ọ bụla na-ere ahịa ga-agbaso usoro 4 nke KYC nke bụ:
Chọpụta ndị ahịa niile
Kwenye njirimara onye ahịa ahụ
Nwee ego nke ego onye ahịa ọ bụla
Lelee ihe omume ego nke onye ahịa ahụ
Nke a bụ ihe kpatara ị ga-eji nye ID ID na ihe akaebe nke adreesị mgbe ọ bụla ịbanye na ikpo okwu ahaziri iche. Onye na-ere ahịa CFTC ga-agbaso iwu ndị edepụtara wee jụọ gị maka aha gị zuru ezu, adreesị ebe obibi, na NJ foto (dị ka paspọtụ gị ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala).
Ọzọkwa, a ga-ajụkwa gị maka akwụkwọ ozi gọọmentị ma ọ bụ ụgwọ ọrụ bara uru site na ọnwa 3 gara aga, ọnwa ma ọ bụ mbata kwa afọ, ọnọdụ ọrụ, yana ụfọdụ akụkọ ntolite ịzụ ahịa.
Omume ahụ e kwuru n'elu bụ ngwakọta nke usoro KYC na CDD. KYC na-eme ka o doo anya na ị bụ onye ị na-ekwu na ị bụ na ọ bụghị ihe ize ndụ ego ma a bịa n'ịchụ ego ma ọ bụ izu ohi. CDD na-eme ka o doo anya na onye na-ere ahia nwere data niile dị mkpa iji nye ndị ahịa kachasị mma maka mkpa gị
A na-ebutekarị usoro ihe siri ike site na mgbe a na-ewere onye ahịa dị ka nnukwu ihe egwu. Dịka ọmụmaatụ, onye ahịa na-ekpughere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ site na mba nwere nnukwu nsogbu. N'oge a, onye na-ere ahịa CFTC ga-eme nyocha zuru oke nke kpụ ọkụ n'ọnụ banyere onye ahịa a jụrụ ajụjụ.
A ghaghị itinye akụkọ zuru ezu zuru ezu na itinye aka na nhazi nke ụlọ ọrụ ahụ, CFTC na-enyocha ego mgbe niile na ntanetị iji hụ na a na-agbaso nke a. Ka anyị were ya na ị na-esi na itinye ego ego nke £ 2,000 kwa ọnwa kalenda, na mberede na-amalite itinye £ 15,000 kwa ọnwa. Onye na-ere ahịa CFTC gị ga-akọrịrị nke a ma hazie nyocha zuru oke iji gosipụta ebe ego si.
Ntinye akwụkwọ Kwa Afọ
Emehiela banyere ya - iwu CFTC nwere ọkpọ aka. Ọrụ a bụ otu n'ime iwu kachasị sie ike n'ụwa ụfọdụ. Dị ka FCA na ASIC na-achịkwa usoro nyiwe, ndị na-ere ahịa CFTC nwere iwu kwadoro ịnye nyocha kwa afọ kwa afọ.
Nyocha a na-eme kwa afọ ga-enwerịrị ọtụtụ nkọwa zuru ezu banyere ihe dịka:
Ego ahia ahia ahia ego
Ịzụ ahịa ahia nọmba
Ego ha n enweta nke akuku akwukwo
Ọfụma ego nkwụsị
Nkọwa zuru ezu banyere leverage ejiri
Ihe ngosipụta doro anya n’agbata iwu ndị ụlọ ọrụ na ndị ahịa mere
Ọ bụrụ na nyocha ndị a na-efu ozi, ma ọ bụ na achọtara na onye na-ere ahịa na-enupụ isi n'iwu n'ụzọ ọ bụla ma ọlị, CFTC nwere ikike iwu iji kwụọ ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ajụjụ. N'okwu ndị siri ike, CFTC nwere ike ịkagbu ikike azụmaahịa nke onye na-ere ahịa.
Nkesa Akaụntụ Banki
Ikewapụ ego nke ụlọ akụ anọwo na ebe nchekwa na ihe karịrị afọ 40 ma tinye ya na SEA Rule 15c3-3 (Securities Exchange Act). Nkewa bụ ihe ọzọ iwu chọrọ maka ndị ahịa CFTC niile.
N'ụzọ bụ isi, achọrọ ka ndị na-ere ahịa niile ka ha jide ego akaụntụ gị na akaụntụ dị iche na nke isi ụlọ ọrụ ahụ. Ihe kpatara nke a doro anya - site na ịkewapụ akụ gị site na nke ya, onye na-ere ahịa CFTC na-echebe ego gị site na nhụsianya na-adịghị mma nke mpụ ego ma ọ bụ ụlọ ọrụ daa.
Enwere ikike itinye ego mgbe ọ na-abịakwute ndị na-ere ahịa CFTC na-azụ ahịa na azụmaahịa, ma ha bụ ndị a:
Isi ego abụọ: A na-etinye ntinye ego na 1:50
Orzọ ego pere mpe: (nke a na-akpọkwa ego ego abụọ) A na-etinye ego na 1:20
Ego ego abụọ: Ejiri leverage ka 1:20.
Nanị ụzọ dị n'akụkụ okpu ndị a bụ ma ọ bụrụ na e weere gị dị ka onye ahịa ọkachamara. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ịkwesịrị ido onwe gị n'okpuru akwụkwọ dị iche iche na onye ahịa CFTC ị họọrọ.
Otu CFTC si echebe ndị ahịa
CFTC na-echebe ndị ahịa site n'ịnọgide na-eguzosi ike n'ezi ihe nke ahịa ego. Nke a pụtara enweghị nnagide maka omume azụmaahịa na-emerụ ahụ, mpụ ego, ma ọ bụ aghụghọ ndị ahịa.
Dị ka anyị kwurula, CFTC emeela ọtụtụ ụkpụrụ na njirisi maka nyiwe nke broka iji rube isi, ọrụ ahụ na-ahụkwa na iwu ndị a na-agbaso site na ịme nyocha oge niile.
Na mgbakwunye na nke a, a chọrọ onye ọ bụla na-azụ ahịa CFTC iji gosipụta nkọwa ikikere CFTC na weebụsaịtị ya. Nke a abụghị naanị na -emepụta ntụkwasị obi na ngalaba ego kamakwa ọ na-enye gị udo nke uche na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ n'ime iwu.
Kedu akụnụba nwere ike beme ahịa na Broker CFTC?
Enweghị ndị na-ere ahịa CFTC abụọ bụ otu, yabụ ọ bụrụ na ị nwere akụnụba n'uche ịchọrọ ịzụ ahịa - tụlee mgbe niile ihe dị na ikpo okwu. Ọ bụ ezie na otu onye na-ere ahịa nwere ike ịmekọrịta naanị azụmaahịa, onye ọzọ nwere ike ịnye naanị otu akụ ọ bụla amaara.
Ọ bụrụ na ị gaghị ekpebi ụdị ngwa ọrụ ego ịchọrọ ịzụ ahịa site n'aka onye na-ere ahịa CFTC, mgbe ahụ ndepụta anyị nke akụ a na-azụkarị ga-enyere gị aka.
Ebuka na Aka Ekeresimesi
O nwere ike bụrụ na ị zụbeghị ahịa tupu oge a, mana ọ nwere ike ịbụ na ị maara ebuka na mbak. Ihe a na-eme na nnukwu ọrụ ahia ahia a na-emegharị ala ugbu a na ịntanetị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye aka na share na-emekọ mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịzụta ma ree ebuka n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, nke a na-enye gị ohere ịnweta ụlọ ọrụ dịka Apple, Ford Motor Co, Amazon, na Procter & Gamble.
Abịa na 'mgbasa'na ụdị ihe a - nke a gosipụtara dị ka ịrịọ / rịọ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọdịiche dị n’etiti ihe onye na-ere ya ga-ere, na ihe onye zụrụ ya ga-akwụ maka ya. Klas a na - enyere gị aka itinye ego na mgbanwe US ​​dịka NYSE na NASDAQ, yana ahịa mba ụwa dịka LSE (London Stock Exchange).
Mgbe a bịara n'ịkesa na-emekọrịta onye na-ere ahịa, s a na-enwekarị ụdị iche atọ. Nke mbu, enwere ‘onye ngbali ime ihe’ nke gha eme ihe obula igwara ha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa klas a mana ịchọrọ inweta ahụmịhe karịa, mgbe ahụ 'ezi uche CFTC' nwere ike bụrụ nke kacha mma, ebe ha na-azụ ma na-ere ka ị ghara. Ndị nwere ọgụgụ isi na-arụ ọrụ karịa, yabụ na-elele ụgwọ ọ bụla ọzọ enwere ike ịkwụ ụgwọ na ụdị ndị a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ n'etiti ebe etiti gbasara itinye aka na itinye iwu, mgbe ahụ ị nwere ike ịchọ 'onye na-agba izu ndụmọdụ'. Typedị onye na-ere ahia a dị ntakịrị ọkara n'etiti aka na aka.
Onye na-enye ndụmọdụ ndụmọdụ CFTC ga-enye gị ndụmọdụ na nduzi nke ahịa na-aga nwere ike ịbara gị uru. Ma ị chọrọ ime na ore ahia na ndụmọdụ ma ọ bụ bụ kpamkpam gị oke, ị nanị nwere ịkụziri ike na gị ọzọ aga.
Na nkenke, nzube nke indices bụ iji gosipụta mmegharị ọnụahịa nke ụdị dị iche iche dị iche iche - na-esitekarị n'otu mgbanwe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, FTSE 100 na-achọpụta 100 nnukwu ebuka na LSE, na Hang Seng Index na-eso 50 nnukwu ụlọ ọrụ ndị edepụtara na Hong Kong.
Mgbe ahụ ị nwere S&P 500, nke mejupụtara ụlọ ọrụ nha 500 sitere na NASDAQ na NYSE. Dow Jones bụkwa ihe ngosi ama ama na ndị ahịa US. Nke a na - achọpụta ụlọ ọrụ America dị ukwuu 30 - ha niile na - akwụ ụgwọ.
Dị ka ị nwere ike ịma, ị ga-edebanye aha na onye na-ere ahịa tupu ịmalite ịmalite ahia Forex. Ka emechara, na ore ahia ga-ikwado ahia n'ihi na ị na gị họọrọ ego ụzọ. Ọzọ, mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa kwuru, gbaa mbọ hụ na ikpo okwu a nwere ikikere iji hụ na ị na-azụ ahịa na gburugburu ebe nchekwa.
All ndị na-ere ahịa CFTC ga-agbaso iwu FIFO (First In, First Out). N'ụzọ bụ isi, nke a pụtara na ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa karịa otu ụzọ ego, ị ga-ewepụ ọnọdụ kachasị dị ogologo karịa nke ọ bụla.
Isi ego abụọ gụnyere USD / CAD, GBP / USD, EUR / USD, USD / JPY, NZD / USD, AUD / USD, USD / CHF, na NZD / USD.
Orzọ ego pere mpe gụnyere EUR / GBP, CHF / JPY, GBP / JPY, GBP / CAD, EUR / AUD, na NZD / JPY.
Currencygwọ ego na osisi na-agụnye USD / HKD, AUD / MXN, NZD / SGD, EUR / TRY, GBP / ZAR na JPY / NOK
Gị CFTC ore na-aga na-enyere gị aka ahia na nke a zuru ụwa ọnụ ahịa 24/7. Dabere n'otú ị masịrị ịnọ na usoro azụmahịa FX, ọ nwere ike ịdị mma ịhọrọ onye na-ere ahịa CFTC nke na-enyekwa ọtụtụ ọrụaka ọrụ ntanetị, mmelite akụkọ akụkọ ego na eserese ọnụahịa.
Enwere ike ịre ahịa ọ bụla 24 awa ụbọchị yana ụbọchị asaa n'izu. Fọdụ ndị na-azụ ahịa na-akpọ akụ a 'ngwa ahịa dị nro' na 'ngwaahịa siri ike'. Agbanyeghị, enwere ike kewaa ngwaahịa na ụdị nkewa 7 - ume, ọla ndị dị oke ọnụ ahịa, ngwaahịa ọhịa, ọrụ ubi 'na' ndị ọzọ '.
Biko chọta n'okpuru ndepụta nke ngwa ahịa ike:
WTI Mmanụ Ala, Mmanụ kpo oku, Brent Crude,
Ọcha Acid Terephthalic (PTA)
Ethanol, Propane, gas nkịtị, Gulf Coast Gasoline, RBOB Gasoline (mmanụ gas gbanwere maka ikuku oxygen)
Na-esote, anyị edepụtala tradable ọla:
Ọla kọpa LME, LME Nickel
Duru, Zinc, gbamgbam, Aluminom, Aluminom alloy
Cobalt, Molybdenum, Ighaghachi ígwè
Ngwongwo Ndị Dị Oké Ọnụ Ahịa: Gold, Platinum, Palladium, Silver
Random Ogologo osisi na Hardwood pulp, Softwood pulp
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ - ugbo:
Owu, Oka, oka, Oat, ebe enwetara n'ike n'ike, Osikapa
Soybeans, Soybean Nri, Soy Meal, Soybean Mmanụ
Mmiri ara ehi, koko, kọfị, agwa Adzuki, kọfị Robusta
Sugar, Oyi Oju Mmiri Ota Oju
Lean Hogs, Ehi na-ebi ndụ, Ehi na-enye nri
Ndị ọzọ - Palm Palm, Rubber, Amber, na Wool.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụ ahịa ngwaahịa na onye na-ere ahịa CFTC, olile anya, ndepụta anyị dị n'elu enyela gị mmụọ nsọ banyere ihe ịchọrọ ịmalite.
Biko chọta n’okpuru ndepụta ụfọdụ n’ime ụdị cryptocurrencies dị n’ahịa dijitalụ:
Enwere ihe karịrị ego 2,000 dị iche iche na-enye ka ọ bara uru ịlele nke cryptocurrencies dị na onye na-ere ahịa CFTC gị. Y’oburu na ohuru ohuru ahia ahia cryptocurrencies, igha acho ibido site na iji gosiputa uzo.
Otu esi achọta onye ahia CFTC
Dingzụ ahịa jupụtara na ịtụnanya, nke ọma na ihe ọjọọ - yabụ ịhọrọ onye na-ere ahịa nke ụlọ ọrụ gọọmentị na-agbaso dị elu dị oke mkpa. N'ime nke a, ị mara ebe ịnọ na ihe ị ga-atụ anya n'ihe gbasara ọrụ.
Anyị achịkọtara ndepụta nke ihe ị kwesịrị ị na-ele anya maka mgbe ị na-achọ ịchụ nta maka ndị ahịa CFTC kacha mma.
Ekwesịrị ikwu na ụfọdụ ndị mmadụ na-enwe mmasị idebe pọtụfoliyo ha naanị na klaasị akụ na ụba. Nke a bụ ikpe kachasị na ndị na-enweghị ego na-enweghị uche, ebe ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ị mụta ọghọm nke akụ ole na ole - karịa ịnwa ịbụ Jack nke azụmaahịa ego niile.
N'ikwu ya, enwere ike ịnwe oge mgbe ike gwụrụ gị ịzụ ahịa ego ndị ahụ ma chọọ ịnwale ihe dị iche. Ọ bụ n'ihi nke a ka anyị ji akwado ịchọọ onye na-ere ahịa CFTC yana nhọrọ nke klaasị dị iche iche. Nke a ga - enyere gị aka ịgbasa pọtụfoliyo gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Mgbasa nke onye na-ere ahịa CFTC nyere nwere ike ime nnukwu ọdịiche na uru azụmaahịa gị n'ozuzu ya. Ejiri mgbasa 'pips', nke bụ ihe dị iche n'etiti Buy na ere price nke akpan owo ị na-ere ahịa.
Iji nye gị ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-ere ahịa ụzọ abụọ EUR / USD na mgbasa nke 4 pips, iji mebie, ị ga-achọ ịbawanye ego gị karịa 4 pips.
Dị ka mgbasa, ụgwọ ọrụ nwere ike imetụta uru ahịa gị. Ndị na-ere ahịa CFTC niile dị iche, yabụ na ị ga-achọ nyocha nke aka gị. Anyị achọpụtala na ụfọdụ ndị na-ere ahịa CFTC anaghị ewe ọrụ ọ bụla ma ọlị. N'aka ozo, ndi ozo na ewere onu ogugu maka ahia obula i gburu.
Iji nye gị ihe atụ nke otu ọrụ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ọrụ na-arụ ọrụ, lelee n'okpuru:
Na-azụ ahịa GBP / USD
Onye na-ere ahịa CFTC gị nwere ụgwọ ọrụ nke 0.8%
Invest na-etinye ego £ 3,000
Onye na-ere ahịa CFTC ga-ewe ọrụ £ 24 (£ 3,000 x0.8%)
Ozi ọma maka gị bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa CFTC anyị na-atụle na ibe a na-enye gị ohere ịzụ ahịa na-enweghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọrụ ọ bụla.
Ngwaọrụ Nyocha Nka na ụzụ
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa aha ọma na-enye ọrụ nyocha nke teknụzụ. Ọ gwụla ma ị bụ onye na-ere ahịa kpamkpam na-eji ngwa ahịa akpaaka, ngwá ọrụ ntanetị dị ezigbo mkpa ma a bịa n'ịkọ amụma mmetụta nke ahịa ahụ.
N'okpuru ebe a, anyị edepụtala ọtụtụ usoro nyocha teknụzụ kachasị eji eme ihe mgbe a bịara n'ịgbasa atụmatụ aghụghọ siri ike.
Nkezi Nkezi Nduzi Ndabere (ADX)
N'uzo nke na-aga n'ihu (EMA)
Ngosipụta olu nha nha nha (OBV)
Onye Stochastic Oscillator
Nkọwa Ike Dị Mkpa (RSI)
Mkpokọta / Nkesa (A / D akara)
Ntughari ntụgharị ntụgharị ntụgharị (MACD)
Karịsịa ma a bịa na ndị ahịa ọhụụ, ngwa agụmakwụkwọ nwere ike bụrụ ihe dị oke mkpa maka ịmụ na ịghọta ihe dịka data data dị ndụ na eserese akụkọ ihe mere eme. N'otu ụzọ ahụ, ngwa ọrụ akara na nnwale nwere ike inyere gị aka ịkọ amụma ahịa.
A sị ka e kwuwe, ị ga-ahụkarị na ụdị ọnụahịa ga-emeghachi onwe ha n'oge ụfọdụ. Dịka anyị metụrụ aka, ụzọ ọzọ dị mma iji kụziere onwe gị bụ ịnwale ụlọ ọrụ akaụntụ ngosi ka ha na-enyere gị aka ịzụ ahịa na ọnọdụ ahịa n'ezie, na-enweghị ihe ọghọm. Ma ọ bụ nke ahụ ma ọ bụ nwalee usoro ịzụ ahịa na-akpaghị aka ka ihe ịga nke ọma nke ahia ahụ ghara ịdabere n'ubu na-enweghị ahụmahụ.
Nhọrọ Ndị Nkwado Ndị Ahịa
Enweghị oge ọ bụla nkwado ndị ahịa adịghị mkpa. N'ime ụwa zuru oke, ndị otu nkwado ndị ahịa CFTC ga-adị njikere inyere gị aka elekere 24 n'ụbọchị na ụbọchị asaa n'izu.
Nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ na-enye nkwado naanị ụbọchị 5 n'izu. Dịka, ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa na 24/7 ahịa dị ka Forex - nke a nwere ike ọgaghị ezuru gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na ngwụcha izu a ga-ahapụ gị nke ọma ma kpọọ nkụ, ụtụtụ Mọnde ga-abụ oge.
N'ihi nke a, na-elele ụfọdụ broshuọ iji hụ ihe nhọrọ ọrụ ndị ahịa dị maka ndị ahịa (na mgbe). Fọdụ na-enye nkata ndụ yana email na ekwentị.
Ịkwụ ụgwọ Nhọrọ
O nwere ike ịbụ na ị gbakọtara ugbu a na onye ọ bụla na-azụ ahịa CFTC ga-adịtụ iche ma a bịa na nhọrọ, ụgwọ na protocol. Ọ bụrụ na e nwere usoro ịkwụ ụgwọ a kapịrị ọnụ ị ga-eji maka akaụntụ azụmaahịa gị - hụ mgbe niile na ọ dị site na ikpo okwu tupu ịmepe akaụntụ.
Anyị na-ahụ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-enye ndị a na-enyo enyo na mbụ mgbe a bịara n'ịkwụ ụgwọ ụzọ. Nke a na-agụnyekarị izipu ụlọ akụ waya na kaadị akwụmụgwọ / debit.
Mgbe ahụ enwere e-wallets dị ka PayPal, Skrill na Neteller nke na-ebili na ewu ewu maka mma dị mma. Fọdụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa nwere ike ịhapụ gị itinye ego site na iji cryptocurrencies dị ka Bitcoin.
Usoro nkwụnye ego na ndọrọ ego
Yabụ, ịchọtala ezigbo onye na-ere ahịa CFTC nke nabatara usoro ịkwụ ụgwọ ị chọrọ - ugbu a ịkwesịrị ịlele usoro iwu ego ya. Fọdụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-akwụ ndị ahịa ụgwọ ụgwọ ka ha debe ma ọ bụ wepụ. Nwere ike ịchọta ozi a na weebụsaịtị nke ikpo okwu.
N'ihe banyere inye ego oge, saịtị ọ bụla ga-adịtụ iche, mana imirikiti ga-ahazi debit / kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ nkwụnye ego e-obere ozugbo. Nke a pụtara na ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa ozugbo. Nke ahụ bụ belụsọ ma ị kpebie itinye ego na nnyefe ụlọ akụ, nke na-enye oge nhazi dị nwayọ.
N'ihe banyere iwepụ ego, nke a ga-arụ nke a site na azụmaahịa n'ime ụbọchị ole na ole.
Nhọrọ Akaụntụ CFTC
Nhọrọ akaụntụ nwere ike ịdị iche, mana ụfọdụ ndị a na-ahụkarị ka edepụtara n'okpuru na nkọwa dị mkpirikpi nke ụdị ọ bụla.
Nano, Micro na Obere Akaụntụ
Imirikiti ndị ahịa anụtụla banyere ụlọ ahịa na-ere ahịa ọkọlọtọ - mana nano, micro na obere akaụntụ na-eburu uzuoku. Ihe ndekọ obere obere ndị a dị mma maka ndị ọchụnta ego ọhụụ ọhụụ na-achọghị itinye nnukwu ego. N'otu aka ahụ, ha ruru ndị ahịa nwere ahụmahụ chọrọ iji obere ego nwalee ụzọ ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ụdị akaụntụ a na-akpọsa, ọ bara uru ịjụ ndị otu nkwado ndị ahịa CFTC. Ha nwere ike ịdị njikere ịnabata akaụntụ iji kwado gị.
Nke a abụghị maka mmadụ niile, mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-eso ụzọ okpukperechi Alakụba, ma ka ịchọrọ ịzụ ahịa - lezienụ anya maka akụkọ ndị Alakụba. Dika iwu Sharia si kwuo - anabataghi na ikwu ugwo bu ihe amachibidoro ma ya mere 'haram' (dika ịgba chaa chaa).
Ọ bụrụ n ’ịbụ onye na - eso ụzọ okpukperechi Alakụba ma ị nweghị ike ịhụ ụdị akaụntụ a akpọsa, ọ nweghị nsogbu na ịjụ ma onye ahịa CFTC ọ ga-enwe ike ịnabata mkpa gị N'ọnọdụ ụfọdụ, ha ga-enye gị 'akaụntụ na-enweghị mgbanwe', nke na-ebelata mmasi n'ọkwá ndị a na-enwe n'abalị.
Anyị na-ekwu maka akaụntụ ngosi ọtụtụ ihe n'ihi na ha bara ezigbo uru maka ndị ahịa na ọkwa niile nke ahụmịhe. Ọ bụghị ndị na-ere ahịa niile na-enye ndị ahịa akụkọ ngosi, mana ọ na-adịkarị mfe ịchọpụta ma enwere otu site na ịga na ikpo okwu na ilegharị anya.
Dị oke mkpa, akụkọ ngosi ihe ngosi na-enye gị ohere inwe mmetụta maka azụmaahịa na-enweghị itinye ego ọ bụla. Ọzọkwa, ha na-enyekwa aka maka ịnwale ihe ọhụrụ dị na gburugburu ebe obibi na-enweghị ihe egwu.
Bido Onye na-ere ahịa CFTC Taa
Olileanya, ka ọ dị ugbu a ị nwere nghọta doro anya maka usoro dị mkpa iji lelee anya mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa CFTC. Ọzọkwa, ị maara mkpa ọ dị iduzi ụfọdụ nnyocha tupu ha etinye aka na usoro ọ bụla maka ịzụ ahịa.
Tupu anyị eruo na ndepụta anyị nke kacha mma CFTC Broka nke 2021, n'okpuru ị ga-ahụ nyocha snap nke etu usoro ntinye aha na-arụ ọrụ.
Nzọụkwụ Otu: Mepee Akaụntụ CFTC
Iji malite ịzụ ahịa, ị ga-achọ ịbanye na onye na-ere ahịa CFTC. Malite site na ịkụ ụlọ ọrụ weebụ. Nbanye aha / mepụta bọtịnụ akaụntụ na-abụkarị otu n’ime ihe mbụ ị ga-ahụ.
Ikwesiri inye ụfọdụ ozi nkeonwe. Nke a bụ usoro izizi nke usoro KYC, n'ihi na ịkwesịrị ime ka onye na-ere ahịa mara onye ị bụ na ebe ibi. Ga-achọkwa ụbọchị ọmụmụ gị, nọmba nchekwa ọha, na kọntaktị kọntaktị gị.
Nzọụkwụ nke abụọ: Nye ihe akaebe nke njirimara
Enwere mkpa maka ndị na-ere ahịa CFTC na-achịkwa iji mata onye ahịa ọ bụla. N'iburu nke ahụ n'uche, ọ ga-adị mkpa ka ị were otu akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala gị ma ọ bụ akwụkwọ ikike ngafe.
Ọ ga-adị mkpa ka ị weta otu akwụkwọ eji akwụ ụgwọ ngwa ọrụ (ma ọ bụ ihe yiri ya na aha gị zuru ezu na adreesị ebe obibi na ya), yana ịza ajụjụ ole na ole gbasara ọnọdụ ego gị.
Nzọụkwụ atọ: Debe Akaụntụ Gị
Anyị ekwuola okwu banyere nhọrọ nkwụnye ego na mbụ, ya mere họrọ nhọrọ kachasị mma maka gị ma gaa n'ihu ma kwado akaụntụ gị.
Usoro a na - adịkarị mfe, ebe ị ga - ahọrọ nhọrọ ịkwụ ụgwọ site na ndetu ala (kredit / debit kaadị wdg), ma kpebie ego ole ị ga - achọ itinye. Lelee anya maka ụgwọ azụmahịa na nke kacha nta.
Nzọụkwụ anọ: Bido ahia / Gbalịa Akaụntụ Akaụntụ
Ọ bụrụ n’ịchọrọ, ị nwere ike bido ịzụ ahịa ozigbo ozigbo e nyere akaụntụ gị ego. Y’oburu n’ichaghi njikere imeri mmiri mgbe ahu i nwere ike iji ihe ngosi ngosi. Nke a bụ, n'ezie, na nkwenye nke onye ị họọrọ CFTC na-eweta ụdị ụlọ ọrụ a.
Kacha mma CFTC Broka nke 2021 - Top Top anyị
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịmalite ịzụ ahịa na ikpo okwu a na-achịkwa nke ọma, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ndepụta anyị nke kacha mma CFTC broka nke 2021. Onye ọ bụla na-ere ahịa na-enye ụgwọ asọmpi, ikpo nke akụnụba, na n'ezie - nke ahụ ikike CFTC niile dị mkpa.
1. IG- Guzosie ike Trading Platform na MetaTrader4
Nke izizi bidoro n'etiti afọ ndị 1970, onye na-ere ahịa CFTC a na-enye nnukwu akụnụba gụnyere cryptocurrencies, commodities, ebuka, indices, na forex ego abụọ - na-ekpuchi ahịa 17,000. N'ikwu okwu banyere ụzọ abụọ, enwere ọtụtụ ịhọrọ site na n'elu ikpo okwu a ka ị wee ghara ịnwe nhọrọ.
Y’oburu na ibu ahia nke n’agaghari mgbe nile, i gha ahu ahia IG bara ezigbo uru. Onye na-ere ahịa CFTC mepụtara ngwa ahụ iji rụọ ọrụ na ngwaọrụ gam akporo na iOS (maka ndị nwere gị iPhone). Iji ngwa mkpanaka ahụ na-enyere gị aka ịzụta na ire na aka nke ihuenyo, ịghara ịkọ banyere ikike ịkwụnye na ịdọrọ na ịdị mfe ebe ọ bụla. IG dakọtara na MetaTrader4. Uzo a na-ewu ewu nke ato na-enye gi ohere itinye usoro ahia ahia nke ugbua ma bia juputara na ngwa oru nyocha.
Nkwụnye ego kacha nta iji bido IG bụ £ 250 (ihe dị ka $ 320) ma ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site na nnyefe akaụntụ akụ, ma ọ bụ maka usoro ọsọ ọsọ - kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ. A na-ahazi ụlọ ọrụ brokerage a ma nweta ikikere site na CFTC, FCA, ASIC na ndị ọzọ.
Ngwá ọrụ ịkụzi bara uru
Ọtụtụ ụzọ abụọ
Onye ahia CFTC nke ọma na-akwanyere ùgwù
Nkwado Ndị Ahịa kwuru ka ọ dị ntakịrị nwayọ
Gaa Leta IG Ugbu a
2. Forex.com - Azụmahịa na MT4
Onye ahịa CFTC a na-enye ihe karịrị 90 forex abụọ yana akụ ndị ọzọ dị ka cryptocurrencies na ọla. Forex.com anaghị akwụ ụgwọ ihe ọ bụla ma ọlị n'ihe gbasara ọrụ na imeghe akaụntụ dị mfe.
Anyị na-ahụ Forex.com ka anyị nwee ụfọdụ mgbasa kachasị mma na oghere. Opekempe ego ịchọrọ itinye iji mepee akaụntụ bụ $ 50, ma nwee ike ịmalite ịzụ ahịa na $ 1 kwa otu.
Ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-azụ ahịa mkpọsa, mgbe ahụ ị ga-enwe ike itinye ego gị ruo 1:50 leverage - ịghara ịkọwapụta ọtụtụ ngwa ọrụ njikwa ihe egwu, atụmatụ azụmaahịa dị ka ọnụọgụ nkwụsị, yana ihe ngosi nka na ụzụ.
Maka ndị gị nwere ike ịnwe obere ahụmịhe na ahịa, Forex.com na-enye ndị ahịa niile akaụntụ ngosi iji melite nka ha. Are na-enwe ike ịzụ ahịa ma ọ bụ na MT4 ma ọ bụ Forex.com ahia ikpo okwu n'onwe ya. Onye na-ere ahia a, dị ka ndị ọzọ na ndepụta anyị, CFTC na-achịkwa ya ma nye ya ikikere.
ANY R NA-EGO
Akaụntụ ngosi dịịrị ndị ahịa
Enwere ike iji ya na MetaTrader4
Obere nkwụnye ego $ 50
Enweghị ego $ 15 (mgbe ọnwa 12)
Enweghi nchebe na-adịghị mma
Gaa Forex.com Ugbu a
3. Oanda - Mgbasa oke asọmpi
Nke a CFTC ore guzo apụ n'ihi na nke magburu onwe trading analysis, ukwuu asọmpi na-agbasa na muta trading ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-etinye ego dị elu mgbe ahụ ị nọ na chi - ka ụlọ ọrụ a na-enye ego dị ala maka ndị na-azụ ahịa karịa ọnụego.
Imepe akaụntụ dị mfe n’elu ikpo okwu nke onye na - ere ahia - nke ị nwere ike ime na ntanetị ma ọ bụ site na ekwentị gị. Oanda juputara na atụmatụ ahia maka ndi n'enye ego ka ha mee otutu ihe, ma anyi choro na i nwere ike imeghari uzo di ugbua ka o kwekorita ahia gi.
Oanda na-enye ndị ahịa asọmpi mgbasa - ọkachasị mgbe ị na-enweta ụzọ abụọ dị ka EUR / GBP. N'ihe banyere itinye ego, ndị ahịa azụmaahịa na-agbanye na 1: 50 - dịka oke CFTC. Y’oburu n’acho inweta ego na egoghari a, i gha aghala $ 20,000 opekata mpe.
Advanced egosi egosi
Mfe imeghe akaụntụ
70 ego akwadoro
Onu ogugu nke uzo abuo nke FX di oke oke
$ 20,000 opekempe maka akaụntụ adịchaghị
Gaa Leta Oanda Ugbu a
4. Ndị na-ere ahịa mmekọrịta - Nnukwu ngwaahịa na ahịa dị iche iche
Ikpokoro a bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama ama na US. A na-achịkwa ya nke ọma ma na-enwe ikikere site na CFTC na SEBI (Securities and Exchange Board of India) - gbakwunyere ọtụtụ ndị ọzọ.
Mepe akaụntụ na ikpo okwu a dị mfe ma na-enye gị ohere karịa ụwa 90. Nke a gụnyere agbụ, ETFs, ebuka na Forex. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịbanye na Ndị na-emekọrịta mmekọrịta, ego kacha nta bụ $ 500. Saịtị ahụ zuru oke na API, NinjaTrader na EAs dị iche iche na-akpaghị aka
Nnukwu nhọrọ nke ngwaahịa
Tonweta ahịa karịrị 90
Detuo ọrụ ahia
$ 500 nkwụnye ego kacha nta nwere ike ịbụ nke ukwuu maka ndị mbido
Oke chọrọ dị n'akụkụ dị elu
Gaa Leta Ndị na-emekọrịta mmekọrịta Ugbu a
5.TD Ameritrade - Ọ dị mma maka ndị na-etinye ego ogologo oge
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye ahịa na-enwe mmasị itinye ego na ogologo oge, mgbe ahụ TD Ameritrade nwere ike ịbụ naanị ihe ị na-achọ. Nke a CFTC ore dabeere na US na bụ maa otu n'ime ndị kasị mma-mara nyiwe domestally. TD Ameritrade anọwo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 50, yabụ mgbe ọkara narị afọ nke nhụjuanya ahịa, ọ bụghị ihe ijuanya na aha ya na-ebute ya.
Mgbe ị na-abanye ụlọ ọrụ a na-azụ ahịa ị nwere ohere ịnweta nchekwa dị iche iche dị iche iche, imirikiti nke ị nwere ike ịzụta ozugbo na bọtịnụ nke bọtịnụ. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana enyere ndị ahịa ikike ịbanye n'ọtụtụ mgbanwe ngwaahịa amaara ama n'ụwa. Nke a gụnyere NASDAQ, NYSE na LSE.
Akụ ndị enyere site na onye ahịa CFTC a gụnyere Forex (otu akụkụ nke Forex niile), nhọrọ, ebuka, ọdịnihu, na ego ibe. Na mgbakwunye na nke a, ịnwere ike itinye ego na IPO site na ụlọ ọrụ. N'ihe banyere ụgwọ ndị na-ere ahịa, ị nwere ike ịzụ ahịa na-enweghị akwụ ụgwọ ụgwọ ọ bụla mgbe ị na-enweta ego ma ọ bụ ETF.
E nwere azụta na onyinye a nke enweghị azụmaahịa - ịkwesịrị idobe ego gị maka opekempe nke ụbọchị 30. Emeghị nke a ga-apụta ịkwụ ụgwọ ọzọ nke $ 13.90 maka azụmaahịa ọ bụla. Maka nke a, ọ ga-aba uru karị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-etinye ego ogologo oge. A na-achịkwa TD Ameritrade n'okpuru CFTC ka ị wee mara na ị na-emeso ụlọ ọrụ nchekwa.
Kasị akpan owo klas dị
Ego ahia efu ma oburu na ijide ego / ETF ihe kariri otu onwa
Odighi mma maka ahia di nwa oge
Gaa Leta TD Ameritrade Ugbu a
N'inwe ọtụtụ anụ ọhịa wolf na uwe atụrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego, ọ dị oke mkpa na ị họrọ onye na-ere ahịa CFTC - ma ọ bụ opekata mpe onye na-ejide ikikere ziri ezi site na ikike ọzọ.
Nke a ga-abụ net gị nchekwa na ama na-ejighị n'aka ohere. Companieslọ ọrụ ndị a anaghị enweta akwụkwọ ikike ha n'ụzọ dị mfe, ebe enwere iwu siri ike ịgbaso dị ka idobe ego gị iche. Na mkpokọta, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa na gburugburu ebe obibi na-echekwa nchekwa na nchekwa, anyị ga-atụ aro iji otu n'ime ndị ahịa CFTC edepụtara na ibe a.
Gịnị bụ CFTC?
Dabere na USA, CFTC na-anọchite anya 'Commodity Futures Trading Commission'. Ejiri ụlọ ọrụ a na-achịkwa ahịa ahịa ma hụ na ndị na-ere ahịa CFTC na-arụ ọrụ n'ime iwu.
Kedu akụ m kwere ka m zụọ ahịa na onye na-ere ahịa CFTC?
Kedu akụ ị nwere ike ịzụ ahịa n'ezie dabere na onye ahịa CFTC ị debanyere. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enye ọtụtụ akụnụba, ụfọdụ na-etinye uche na ole na ole.
Ọ dị mma iji onye na-ere ahịa CFTC?
Ee, ọ dị mma iji onye na-ere ahịa CFTC. Onye ọ bụla na-ere ahịa na-ejide ikikere CFTC na-arụ ọrụ n'okpuru iwu siri ike. Ndị na-ere ahịa CFTC niile bụ ndị nghọta na ndị a tụkwasịrị obi.
Enwere m ike ahia cryptocurrency site a CFTC ore?
Eeh. Na 2015 CFTC kpọrọ ka etinyere cryptocurrencies dị ka ngwa ahịa. N'ihi ya, ka ọ dị na 2018 cryptocurrencies na CFTC.
Kedu ka m ga-esi jide n'aka na a na-achịkwa onye na-ere ahịa ahịa?
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa, ebe a chọrọ ndị na-ere ahịa CFTC iji gosipụta nọmba ikike ya nke ọma na ndị ahịa. Ọ bụrụ na ejighị n'aka, gaa na BASIC (Ebe Nlekọta Ọnọdụ Ọnọdụ Ozi) nke bụ akụkụ nke NFA. Ozugbo ahụ, ị ​​nwere ike tinye nọmba ikike iji jide n'aka na ọ bụ legit.
Emelitere ikpeazụ: January 20th, 2021
Anyị na-eji kuki iji hụ na anyị na-enye gị ihe kasị mma ahụmahụ na anyị website. Ọ bụrụ na ị nọgide na-eji saịtị a, anyị ga-ewere ya na ị na-enwe obi ụtọ na ya.OkAmụma nzuzo